ထိုငျးကားဈေးကှကျထဲမှာ ဈေးအကွီးဆုံး SUV - Myanmar Automobile and Equipment Directory
ထိုငျးနိုငျငံမှာ Rolls-Royce ရဲ့ Black Badge မူဖွငျ့ ထုတျလုပျထားတဲ့ Cullinan SUV ကို စတငျရောငျးခပြါတယျ။
Black Badge Cullinan ကို ဘတျ ၃၇. ၈ သနျးဖွငျ့ ဈေးဖှငျ့တာကွောငျ့ ထိုငျးနိုငျငံ စညျးစိမျဂုဏျပွကားဈေးကှကျမှာ ဈေးအမွငျ့ဆုံး SUV ဖွဈပါတယျ။
စှမျးဆောငျရညျအတှကျ Cullinan မှာ ၆ .၈ လီတာ V12 အငျဂငျြ ထိုငျပေးထားပွီး အျောတိုဂီယာ ၈ ခကျြ နဲ့ တှဲပေးထားတယျ။ လေးဘီးယကျအဖွဈလညျး မောငျးလို့ ရတယျ။ သုံညကနေ တဈနာရီ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ကို ငါးစက်ကနျ့ဖွငျ့ ရောကျအောငျ အရှိနျတငျပေးနိုငျတယျ။ အမွငျ့ဆုံး အမွနျနှုနျး တဈနာရီ ၂၅၀ ကီလိုမီတာ ဖွဈပါတယျ။
သကျကွီးပိုငျးတှထေကျ သကျလတျပိုငျး ဝယျလကျတှကေို ရညျရှယျထားတာမို့ အမွငျလနျးအောငျ အမညျးအမှောငျတှထေဲမှာ အဝါရောငျ တောကျတောကျလေးတှေ ဟိုနားတဈခု ဒီနားတဈခု ဖွညျ့ထညျ့ပေးထားတယျ။ အပွငျဘကျမှာတော့ ဘီးရဲ့ ဘရိတျရှူး ကလဈပါကို အနီရောငျ တမငျသုံးပေးထားတယျ။ အမညျးအမှောငျထဲ မီးခဲနီနီလေးလို ဖွဈနတေယျ။
အတှငျးခနျး မကျြနှာကွကျမှာ ညကောငျးကငျမှာ ကွယျတှကေို မွငျရတဲ့အတိုငျး အလှဆငျပေးထားတာဟာ Cullinan ရဲ့ ပငျကိုယျထူးခွားခကျြ ဖွဈပါတယျ။
Black Badge Cullinan ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ စညျးစိမျပွ ကားဈေးကှကျထဲမှာ ဈေးအကွီးဆုံး ဖွဈပမေဲ့ အမွနျဆုံး SUV တော့ မဟုတျပါဘူး။ သူ့ထကျ မွနျတဲ့ Bentley Bentayga ၊ Lamborghini Urus ၊ Maserati Levante Trofeo ၊ Aston Martin စတဲ့ကားတှေ ရှိပါတယျ။
Cullinan ဈေးကွီးတာ ဟုတျပါတယျ။ "လာဝယျတဲ့သူတှကေ ကားရဲ့ အရညျအသှေး စံတှကေို ကွိုကျတယျဆိုရငျ ဘယျလောကျ ပေးရသလဲဆိုတာ နှဈခါ မစဉျးစားဘူး။ အဲလို လူစားမြိုးတှပေဲ ကြှနျတျောတို့ Rolls-Royce ဆီကို လာကွတာ မဟုတျလား" လို့ အရောငျးတာဝနျခံက ဆိုပါတယျ။
ထိုင်းကားဈေးကွက်ထဲမှာ ဈေးအကြီးဆုံး SUV
MGC Sales Asia အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ Rolls-Royce Bangkok က ထိုင်းနိုင်ငံမှာ Rolls-Royce ရဲ့ Black Badge မူဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Cullinan SUV ကို စတင်ရောင်းချပါတယ်။
Black Badge Cullinan ကို ဘတ် ၃၇. ၈ သန်းဖြင့် ဈေးဖွင့်တာကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံ စည်းစိမ်ဂုဏ်ပြကားဈေးကွက်မှာ ဈေးအမြင့်ဆုံး SUV ဖြစ်ပါတယ်။
စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် Cullinan မှာ ၆ .၈ လီတာ V12 အင်ဂျင် ထိုင်ပေးထားပြီး အော်တိုဂီယာ ၈ ချက် နဲ့ တွဲပေးထားတယ်။ လေးဘီးယက်အဖြစ်လည်း မောင်းလို့ ရတယ်။ သုံညကနေ တစ်နာရီ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ကို ငါးစက္ကန့်ဖြင့် ရောက်အောင် အရှိန်တင်ပေးနိုင်တယ်။ အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း တစ်နာရီ ၂၅၀ ကီလိုမီတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သက်ကြီးပိုင်းတွေထက် သက်လတ်ပိုင်း ဝယ်လက်တွေကို ရည်ရွယ်ထားတာမို့ အမြင်လန်းအောင် အမည်းအမှောင်တွေထဲမှာ အဝါရောင် တောက်တောက်လေးတွေ ဟိုနားတစ်ခု ဒီနားတစ်ခု ဖြည့်ထည့်ပေးထားတယ်။ အပြင်ဘက်မှာတော့ ဘီးရဲ့ ဘရိတ်ရှူး ကလစ်ပါကို အနီရောင် တမင်သုံးပေးထားတယ်။ အမည်းအမှောင်ထဲ မီးခဲနီနီလေးလို ဖြစ်နေတယ်။
အတွင်းခန်း မျက်နှာကြက်မှာ ညကောင်းကင်မှာ ကြယ်တွေကို မြင်ရတဲ့အတိုင်း အလှဆင်ပေးထားတာဟာ Cullinan ရဲ့ ပင်ကိုယ်ထူးခြားချက် ဖြစ်ပါတယ်။
Black Badge Cullinan ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ စည်းစိမ်ပြ ကားဈေးကွက်ထဲမှာ ဈေးအကြီးဆုံး ဖြစ်ပေမဲ့ အမြန်ဆုံး SUV တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ထက် မြန်တဲ့ Bentley Bentayga ၊ Lamborghini Urus ၊ Maserati Levante Trofeo ၊ Aston Martin စတဲ့ကားတွေ ရှိပါတယ်။
Cullinan ဈေးကြီးတာ ဟုတ်ပါတယ်။ "လာဝယ်တဲ့သူတွေက ကားရဲ့ အရည်အသွေး စံတွေကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက် ပေးရသလဲဆိုတာ နှစ်ခါ မစဉ်းစားဘူး။ အဲလို လူစားမျိုးတွေပဲ ကျွန်တော်တို့ Rolls-Royce ဆီကို လာကြတာ မဟုတ်လား" လို့ အရောင်းတာဝန်ခံက ဆိုပါတယ်။